Mapato ezveMatongerwo eNyika Opomera ZEC Mhosva Yekuita Zanondega
ZEC iri kupomerwa mhosva yekushara yoga nzvimbo dzekunyoresera kuvhota
Mapato anopikisa mudunhu reMashonaland West anopesana nehurongwa hweZimbabwe Electoral Commission, ZEC, hwekusavhura nzvimbo dzekunyoresa kuvhota mune mamwe matunhu avanoti akakosha.
Mapato aya anoti anoshamiswa zvikuru kuti ZEC yakatadza kuvhura kana nzvimbo imwechete zvayo yekunyoresa kuvhota muChinhoyi vachiti kune nzvimbo dzemigodhi dzakaita seAlaska neShackleton Mine, idzo dzinogara vanhu vakawanda vaisabvumirwa kuvhota vachinzi hazvisi zvizvarwa zvizere zvemunyika.
Nhengo yeMDC-T inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai inoona nezvesarudzo VaEdward Kadewere vanoti ZEC haina kubvunza vemapato ezvematongerwo enyika pavakasarudza nzvimbo dzekudzokorora kunyoresa kuvhota.
VaKadewere vanoti humbimbindoga hweZEC uhu ndihwo hunoita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka munyaya dzesarudzo munyika.
Sachigaro wevechidiki mubato reNational People’s Party, NPP, inotungamirirwa nevaimbove mutevedzeri wenyika Amai Joyce Mujuru, VaShepherd Matsose vanoti zviri kuitwa neZEC zvekusavhura nzvimbo dzekunyoresa kuvhota munogara vanhu vaisabvumirwa kuvhota vachinzi hazvisi zvizvarwa zvizere zvemunyika kubirira sarudzo.
VaMatsose vanoti bato ravo harivimbe nekufambiswa kwesarudzo kunoitwa neZEC.
Patavayeuchidza kuti muChinhoyi mune nzvimbo yedunhu inogara yakavhurwa, VaKadewere vanoti nzvimbo dzakavhurwa kunyoresa kuvhota dzose dzine nzvimbo dzematunhu dzinogara dzakavhurwa uye vanhu vanotokwira zvekufambisa kuuya muChinhoyi kuzonyoresa.
Asi mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West VaAustine Ndlovu vanoti kunyoresa kuvhota kwakawedzerwa nguva kuri kuitwa uku kwakasarudzwa nzvimbo dzekunyoresa vachitarisa nzvimbo dzakapihwa vanhu zvitupa nemagwaro ekuzvarwa chirongwa chekunyoresa kuvhota chatanga kare.
Kunyoresa kuvhota kwekupedzisira uku kwakatanga musiwa 10 Ndira uye kuchapera musiwa 8 Kukadzi. Vanhu vanodarika mamiriyoni mana vanonzi vakakwanisa kunyoresa kuvhota muzvikamu zvina zvekunyoresa zvakaitwa gore rapera kunyange ZEC yaitarisira kunyoresa vanhu mamiriyoni manomwe.